Microsoft waxay bilawday qalab loogu badalayo barnaamijyada macruufka ah W10 | Wararka IPhone
Microsoft waxay bilaabeysaa horudhaca qalabkeeda si loogu badalo barnaamijyada macruufka ah Windows 10
Paul Aparicio | | Windows Phone
On July 30, Microsoft ayaa sii daayay Windows 10, nidaam la filayo inuu noqdo bilowga wax weyn. Waqtiga si rasmi ah loo heli karo, waxaa la xaqiijinayaa in horay loogu rakibay in ka badan 14 milyan oo kombiyuutarro ah, waana wax muujinaya muujinta xiisaha isticmaaleyaasha nooca cusub. Oo ay weheliso sii-deyntaan Microsoft ayaa soo saartay horudhac iyo nooc il furan oo qalabkeeda loogu talagalay u beddelashada barnaamijyada iOS-ka noocyada Windows 10.
Qalabkan ay soo saartay shirkadda Microsoft waa isla kii ay soo bandhigeen bishii Abriil ee la soo dhaafay. Microsoft waxay xaqiijineysaa in, Horumariyaasha, ka beddelashada barnaamijyadooda macruufka ama noocyada 'Android' barnaamijyada Windows 10 ee la jaan qaadaya waxay noqon doonaan dadaal la'aan, muxuu yahay isku day cad oo lagu soo jiito dareenka soo-saare kasta oo horeyba codsi ugu lahaa App Store iyo / ama Google Play.
“Waxaan bilaabi doonnaa iOS Bridge oo ah mashruuc il-furan oo ka hooseeya ruqsadda MIT. Marka la eego himilada mashruuca, si loogu fududeeyo horumariyeyaashu inay abuuraan oo ay ku shaqeeyaan barnaamijyada Windows, waxaa muhiim ah in la ogaado in sii deynta maanta ay si cad u tahay shaqo socota - qaar ka mid ah astaamaha la muujiyay wali diyaar ma ahan ama waxay ku jiraan bilow gobolka. Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahayn dadka xiisaha leh ee xiisaha leh inaan siino Bridge isku day oo aan isbarbar dhigno waxa aan dhiseyno shuruudaha dalabkaaga. […] Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad naga caawiso adoo ku biirinaya mashruuca kaqaybqaatayaasha bulshada - oo wata lambar koodh, tijaabooyin, warbixinno bug ama faallooyin. Waxaan soo dhaweyneynaa kaqeybgal kasta si gacan looga geysto dhismaha buundadan »
Waqtigaan, horumariyayaashu waxay sameyn karaan isbeddelada lagama maarmaanka u ah inay u keenaan barnaamijyadooda macruufka ah Windows 8.1 iyo Windows 10, oo la jaan qaadaya processor-yada x64 iyo x86. Microsoft ayaa cusbooneysiin doonta aaladda mustaqbalka si ay ula jaanqaado kombiyuutarada ku saleysan Chipsets-ka ARM.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Windows Phone » Microsoft waxay bilaabeysaa horudhaca qalabkeeda si loogu badalo barnaamijyada macruufka ah Windows 10
Waxaan rajeyneynaa in boodhka Infinity loo isticmaali karo PC HAHA
Ku jawaab Gonzalo Parisi
Runtu waa qabow, waxaan isticmaalaa kumbuyuutarrada Windows 7, maxaa yeelay lacagtu iima imaanayso IMac :(, laakiin haye, dhammaan waxyaabaha qabow waa la soo dhaweynayaa !!
MIT ka sokow, waxay ila egtahay nolosha badhkeed 2 aniga markii aad timaado miiskan madow, oo Eli wuxuu kuu sheegayaa: «waa inaad iska siibtaa suudkaaga difaaca oo aad gashataa jaakad shaybaarka ay kuwa MIT ka qalin jabiyeen maalmahan» , Ciyaar wanaagsan waxaan kugula talinayaa XD
Salaan iyo maqaal wanaagsan!
Salaan Rafael. Ma ku waydiin karaa 😉
Ma isku dayday Windows 8,1?
Iyo Windows 10?
Ma kula tahay in 10 ka wanaagsan yahay 8.1?
Waa "ku riix" dadka qaarkiis dariiqa saxda ah ama in la iga aamuso.
VDayaanna ks (@xDayaannax) dijo
Hello Pablo, waxaan haystay 8,1 mana aanan jeclayn gabi ahaanba, waa inaan dhahaa foomka tareenka dhulka hoostiisa mara iyo kuwa kale, waa wax laga naxo ... Windows 7 ayaa ah kan ugu sareeya, nooca ugu fiican ee xasiloon waxaanan u maleynayaa inay waxyaabo badan barteen laga bilaabo tan. Hadda waxaan haystaa Windows 10 laptop-ka, oo aan maalin walba u adeegsado shaqo, waxaanan kuu xaqiijinayaa inay weyn tahay, waan jeclahay, waa wax aad u dhaqso badan oo runti, waa inaan aragnaa sida kiniiniyada cusub ee Microsoft u dhaqmaan, laakiin hadda waxaan siineynaa tilmaam ah inay ku dhacayaan kubad halis ah iyo inay diyaarinayeen oo ay baytariga dhigayeen muddo dheer 😉
Aniga shaqsiyan, way ila yaabeen ..
Jawaab Guiller Vks @ (@GuillerVks)
Waad salaaman tahay, Guiller. Waad xaqiijineysaa waxa aan qiyaasay. Waa inaan riixaa dhowr qofood aawadood si aan u rakibo W10. Waxa ugu liita waa qof leh "kumbuyuutar" qaraabo ah oo doonaya inuu dhigto Windows 7 ... Ma fahmin oo waan waalanayaa.
Salaan iyo mahadsanid aqrintaada iyo faallooyinkaaga.
Waad salaaman tihiin. Waxaan aqriyay faallo aan dhawaan ka qoray iPhone qof ka cawday in Windows 10 uusan la jaanqaadi karin iTunes, ma xaqiijin kartaa haddii ay sidaas tahay? maxaa yeelay hadday saas tahay waxaan rajeynayaa inaan cusbooneysiiyo Windows 10 illaa uusan la jaan qaadi karin Windows 10 ... salaan.
Waad salaaman tahay, Enrique. Xaqiiqdii ma xaqiijin karo, laakiin waxaan ka akhriyay baloog muhiim ah oo soo dejinaya iTunes mar labaad iyo dib u dhigiddu ay xalliso dhibaatada. Guuldarradu waxay umuuqataa inaysan ahayn sababta oo ah isma waafaqsana, laakiin waxay imaanaysaa markii laga cusboonaysiinayo Windows-kii hore.
Waan ka xumahay waxaan ula jeeday iTunes.
Aad baad u mahadsantahay Pablo. Dhamaan wanaag.
Tutorial Lugood bilaash ah xisaabta waxaadna kala soo bixi kartaa daboolida cds-ka
Sida loo soo dejiyo waraaqaha cusub ee iOS 9 beta 5